Foto maka Mkpụrụ obi
Gịnị Na-eme Mgbe Mmadụ Nwụsịrị?
Gịnị Ka Bible Na-eme Na-eme Ma Ọ nwụsịrị?
Akwụkwọ Ozi si n'eluigwe
Akwụkwọ Ozi si Hel
Eluigwe nke Ụlọ Anyị Ebighị Ebi
Aga m ejide gị n’eluigwe
Mmekọrịta Anyị na Eluigwe
Ka Anyị Ga-amata Onye Ọ Bụla n'Eluigwe?
Akwụkwọ Ozi Ịhụnanya sitere n'aka Jizọs
Otu òkù nabatara Kraịst
Nkwupụta site n'aka Bob Stern
Okwukwe na ihe akaebe
E-traktị na-akwụghị ụgwọ
Imeri Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ
Oge Ọchịchịrị nke Mkpụrụ Obi
Ọkụ nke Nhụjuanya
E Nwere Olileanya
- acha anụnụ anụnụ
- Agba odo
Oldlọ ochie & Ogwe
Ịhụ Chineke site na Nature
Mmiri na Gorges
Ụlọ Nzukọ Ndị njem
Ị ma onye Jizọs bụ?
Ọ dị mma gụọ na…
Pịa ebe a maka akwụkwọ edemede
Azịza Bible nke Ajụjụ Ndị Mmụọ Nsọ
Eluigwe - Homelọ ebighi ebi anyị
G in i Na-eme Emechi Mgbe I Nwụsịrị?
VIew Foto osisi nke Nature:
Oldlọ ochie na Barns
Ogige National Gettysburg
Ogige Letchworth State
Foto maka Mkpụrụ Obi bụ ebe nrụọrụ weebụ emebere iji gbaa ndị kwere ekwe ume ma rute mkpụrụ obi furu efu maka Onyenwe anyị, ọkachasị ndị chere na ha dapụrụ oke n ’amara Chineke ka a zọpụta ha.
Anyị na-ahụ onye nleta ọ bụla dịka mkpụrụ obi nwere ike ịme ka anyị nwee ike iru, Onyenwe anyị emewokwa n'ụba karịa ihe niile anyị chepụtara, na ịchekwa ndị e gosipụtara ozioma site na Photos maka Mkpụrụ obi.
Anyị ga-enwe ekele n’ekpere gị n’ịrịọ ngọzi Chineke n’ozi a, na ịkwado obi ndi bịara na saịtị anyị, ka ndụ ha gbanwee, iji mee ka ha bịaruo Ya nso.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị nọrọ ruo ogologo oge ịchọrọ, ma chọgharịa nchịkọta foto anyị na akwụkwọ edemede.
Enweghi ike ibudata ma ọ bụ bipụta foto ọ bụla na gallery anyị, maka ojiji nke gị, akwụkwọ akụkọ ụka, kaadị, wdg.… Ma ọ bụ tinye njikọ anyị na saịtị gị.
Daalụ maka nkwado gị na isoro gị maka mgbasa oziọma ahụ.
Atụmatụ nzọpụta nke Chineke dị iche iche na asụsụ dị iche iche
Akuku maka Uto Ime Mmụọ na Iso Ụzọ
Ọ dịtụla mgbe ị nwetụrụ ntakịrị furu efu ma chọọ na e nwere nduzi ọsọ ọsọ na mmekọrịta gị na Chineke? Nke a bụ ya!
Nke a bụ Enyemaka
Kwesịrị Ikwu Okwu? Nwere Ajụjụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ anyị maka nduzi ime mmụọ, ma ọ bụ maka nlekọta na-elekọta, nweere onwe gị idegara anyị akwụkwọ na photosforsouls@yahoo.com. Anyị na-ekele ekpere gị ma na-atụ anya izute gị na mgbe ebighị ebi!
Pịa ebe a maka "Udo na Chineke"
Copyright © 2018 Foto maka Mkpụrụ obi bụ ozi nke The Wellsville Bible Church